अंग्रेजी बोल्ने पाइलट नपाएर नेपाल वायुसेवालाई तनाव ! – Himal Post | Online News Revolution
अंग्रेजी बोल्ने पाइलट नपाएर नेपाल वायुसेवालाई तनाव !
himal post २०७५, २३ बैशाख ०९:०४ May 6, 2018
काठमाडौँ, – अंग्रेजी बोल्ने पाइलट नपाएर नेपाल वायुसेवालाई तनाव भैरहेको छ । तीन जना चिनियाँ पाइलट ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाए पनि यो प्रक्रिया अझै लम्बिने बताइएको छ ।
वाइ–१२ सिरिजका विमान उडाउनका लागि निगमले अंग्रेजी बोल्न जान्ने पाइलट ल्याउन लागेको हो । आठ हजार अमेरिकी डलर तलब सुविधा दिने गरी तीन पाइलट ल्याउन लागिएको निगमले जनाएको छ ।
चिनियाँ पाइलटको भने लाइसेन्स ल्याएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमतिका लागि कागजपत्र बुझाइएको छ । छोटो अवधिका लागि करारमा चिनियाँ पाइलट ल्याउन लागिएको हो । नेपाली पाइलट तयार भए पनि उनीहरुलाई फर्काइनेछ । लामो समयसम्म उनीहरुलाई राख्दा खर्चभार महँगो हुने भएकाले नेपाली पाइलट तयार नभएसम्म मात्र चिनियाँ पाइलट राखिने बताइएको छ ।
अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा पनि वाइ १२ चलाउने पाइलट पाइन्छ भन्ने जानकारीका आधारमा त्यहाँ खोजी भएको हो । एक/दुई जना पाइलट त्यहाँबाट पनि ल्याउने प्रक्रिया अगाडी बढेको र अहिले उनीहरुको लाइसेन्स र बायोडाटा मगाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले चीनबाट ल्याइएका सबै विमान तीन महिनाभित्र उडाउन निर्देशन दिएका थिए । चिनियाँ विमान निगमलाई हस्तान्तरण गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित समारोहमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उपाधिको लागी एक जीत काफी
शिक्षा मन्त्रालय र विभागले लुकायो पियन र पालेको दरबन्दी